Izindlu kunye neendawo zokuhlala ezindala ezinephuli, yokurenta kunye nokuthengisa kwisiqithi sase-Ibiza.
Villas eIbiza | Izindlu kunye neevillas ezinamachibi okurenta kunye nokuthengisa kwisiqithi saseIbiza.
Phila amava afanelekileyo eIbiza
Phila ngamava afanelekileyo eIbiza
Fumana isilayidi sakho sepharadesi phakathi kokukhetha kwethu izindlu zokuhlala eIbiza
icon / kabini-chevron-phantsiYenziwe nge Sketch.
Bhrawuza ingqokelela yethu entle yeeVillas zokurenta
Sizinikezele ekufumaneni i-villa yakho efanelekileyo eholide e-Ibiza.
Khetha phakathi kokukhethwa kwethu kweendawo zokuhlala ezintle kunye nephuli okanye iifincas eziqhelekileyo ezinomphefumlo, indawo nganye yokuhlala kwipotifoliyo yethu ikhethwe ngononophelo kwaye inika lonke uhlobo lwentuthuzelo.
Indlu entle yanamhlanje kunye nesitayile eIbiza
Le yindlu yokulala emihlanu ye-550m2 ebekwe embindini weentaba ze-Ibiza. Umoya ogcweleyo uhambisa ukuzola okuphucukileyo ngengqondo yobuhle bendalo obungapheliyo kwaye unikezela nge ...
Yongeza izinqumli Susa kwiintandokazi
Finca entle yokurenta eIbiza eneembono zolwandle
Le finca inomtsalane yerenti e-Ibiza imi kumantla esiqithi kuphela kwimizuzu embalwa ukusuka kwilali edumileyo yaseSan Juan. I-finca ineminyaka engama-300 ubudala kwaye ibuyisiwe kwi-Moori ...
Indawo entle esembindini weIbiza, indawo yoxolo
Indlu entle eIbiza, indawo yoxolo, inempahla entle kwaye yakhiwe kutsha nje, ine-300m² eyakhiwe, ixhotyiswe ngokupheleleyo ngemeko yomoya. Yi-4 km ukusuka eSanta Gertrudis kunye ne-10 km ukusuka ...
Indlu entle yanamhlanje e-Ibiza kufutshane nomazantsi esiqithi
Le ndlu intle yanamhlanje isebenzisa ukukhanya kwendalo okuvela kwiifestile ezinkulu ezinika imvakalelo yendawo kunye nokugxininisa kumgangatho woyilo lwayo. Indlu imi kwilali esecaleni kwentliziyo ...
Okanye ukhangele ingqokelela epheleleyo
Ibiza, isiqithi esimhlophe
Iilwandle ezintle ezinamanzi aluhlaza kunye namawa amqengqelezi, iilali ezintle, i-gastronomy emnandi kunye nezinye zeeklabhu ezaziwa kakhulu kwihlabathi. Ibiza konke oku nokunye okuninzi. Ilifa lemveli lenkcubeko elibangelwe kukutshintshiselana ngeenkcubeko ezahlukeneyo ezenza imbali yayo, iPunic, iRoma, iFenike… isijikile esi siqithi sincinci seMeditera saba sisalathiso sehlabathi.
Ke kutheni ukonwabela i-Ibiza kuphela ehlotyeni? Nokuba yiKrisimesi, iVeki yePasika okanye naliphi na elinye ixesha lonyaka, iintsapho zinokonwabela uluhlu lwemisebenzi yaselwandle ngenxa yemozulu ethambileyo kunye nobuninzi beentsuku ezinelanga.
Ukuba ufuna ingcebiso ngendawo yokuhlala, gcwalisa ifom okanye utsalele umnxeba.
Siya kukuvuyela ukukunceda ufumane indawo efanelekileyo yokuhlala kwaye ufumane i-Ibiza eyiyo.
Bhalisa kwi-eyethu Newsletter
Ukuthengiswa kwezindlu e-Ibiza
Ngaphandle kokuba idume ngobomi bayo bobusuku kunye neendawo ezinesitayile, i-Ibiza ingaphezulu kweelwandle kunye neeklabhu. Isiqithi sinikezela ngomlingo kunye neendawo ezintle, indawo engangcoliswanga kunye nomgangatho wobomi obumnandi nje kwiiyure ezimbalwa zokubhabha kuyo nayiphi na indawo eYurophu.
Ibiza yindawo efanelekileyo yokuba nendlu.
Jonga uluhlu lwethu lweendawo zokuhlala ezithengiswayo, iiflethi kunye neeprojekthi zophuhliso lomhlaba e-Ibiza
Umhlaba uyathengiswa eIbiza ngeprojekthi
Ixabiso lokubuza 550.000 €
Yonke iflethi okanye indlu ekwicomplex XNUMX ibhedi Botafoch
Ixabiso lokubuza 1.200.000 €
Indlu yentengiso yentengiso e-Ibiza-Marina Botafoch
Ixabiso lokubuza 1.590.000 €
I-villa iyathengiswa eIbiza, emantla esiqithi
Ixabiso lokubuza 1.399.000 €
Izithintelo kwisiqithi saseIbiza ngenxa yobhubhane we-covid-19.
Uhlaziyo lwe-17 Nov 2021 Okwangoku isakhelo somthetho eSpain asimiseli isibophelelo sokugonya kwaye sinyanzelise ukuvalelwa kwabo bangagonywanga, njengoko sele kusekiwe.
Imeko yeCovid 19 -Coronavirus eIbiza, Balearic Islands, Spain
16 Nov 2021 Okwangoku e-Ibiza naseFormentera kukho abantu be-266
Ukuvulwa ngokukhawuleza kwee-nightclub e-Ibiza.
Izithintelo e-Ibiza kunye ne-Formentera ngenxa ye-coronavirus covid-19 zisusiwe njengoko
Ukusukela oko kwaqala ubhubhane we-coronavirus covid-19, abantu abaninzi bayaqhela
Iiholide zeyacht eIbiza
Itshata ye-superyacht kwiziqithi zeBalearic lelona thuba lilungileyo lokufumana amava
Nge-16 kaNov 2021 Okwangoku e-Ibiza naseFormentera kukho abantu abangama-266 abosulelwe yi-coronavirus covid-19. Eli lelona nani liphezulu leemeko ezisebenzayo zentsholongwane
Izithintelo e-Ibiza nase-Formentera ngenxa ye-coronavirus covid-19 iphakanyisiwe njengoko imeko ye-epidemiological kwii-Balearic Islands iphucula. Iiklabhu ze-Ibiza ziya kuba nakho ukuvula
Ukusukela oko kwaqala ubhubhane we-coronavirus covid-19, abantu abaninzi bayaqhela ukusebenzela ekhaya kwaye ngelixa ukusasazeka kweNtlalo kusaqhubeka kwaye amazwe amaninzi
Itshata ye-superyacht e-Balearic archipelago lelona thuba lilungileyo lokufumana eyona ndawo intle kunxweme lolwandle lweMeditera. Nokuqesha isikhephe esineenjini
Ukurenta ixesha elide eIbiza
Ngelixa amakhulukhulu abantu baseYurophu bebonisa ezitratweni ngokuchasene noorhulumente babo malunga nokuvalelwa, nto leyo iphinde yabavalela emakhayeni abo benethuba lokuhamba
Indawo yokuhlala eNtofontofo eIbiza ejongene noLwandle
Isitayile esimnandi soBuncinci beVilla eIbiza
I-villa eyiNdawo entle yanamhlanje kunye neSitayile eIbiza
I-villa yangoku e-Ibiza
Akukho nto ibetha ulwazi lwethu lokwenyani lwe-Ibiza.
Sitsalele uncedo, amaxabiso aphezulu kunye neenkonzo zeconcierge.
Villas eIbiza | Izindlu kunye neendawo zokuhlala ezindala ezinephuli, yokurenta kunye nokuthengisa kwisiqithi saseIbiza.
Ukukhethwa kwee-villas zokurenta
Ingqokelela epheleleyo >>
Indlu entle eIbiza eneembono zolwandle kwikona nganye yendlu
Ukususela kwi-1.200 € / ngosuku
Indawo entle ebiyelwe ngokupheleleyo eIbiza ngokubonakalayo kolwandle
Indawo entle yokuqeshisa e-Ibiza eneembono ezintle
Ukususela kwi-2.000 € / ngosuku
Ibhlog, imagazini, iingcebiso nge-Ibiza
Imagazini epheleleyo >>
Ingxaki ichongiwe kolu hlobo lulandelayo. Ukuyithumela kunokubangela iimpazamo. Nceda uqhagamshelane nomphathi wesayithi.
Ndifuna ukwenza ugcino Ndifuna ukuthenga ipropathi Ndifuna ulwazi
Villas Apartments amazwe
IAvinguda de Santa Eulària des Riu, 17, Ibiza,
Iindawo zokuhlala ezindala